अन्डरवेयर लगाउँदाका यस्ता छन् ५ अविश्वनिय फाइदाहरु !
उपत्यकामा ६४५ संक्रमित २ जनाको निधन
थप १२ सय ७ जनामा कोरोना पुष्टि ज्यान गुमाउनेको संख्या ४६७ पुग्यो
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निर्देशनपछि वाग्मती प्रदेशमा लकडाउन कडा बनाइने भएको छ । भोलिदेखि प्रदेश राजधानी हेटौँडामा लकडाउन अवधिभर मोटरसाइकल सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ । किनमेलको समयलाई बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म ३ घण्टा कायम गरिएको छ ।
वाग्मती प्रदेश मकवानपुरसँग जोडिएका प्रदेश २ का जिल्ला पर्सा र रौतहटमा समेत कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित फेला परिसकेको अवस्थामा विभिन्न बहानामा व्यक्तिहरु बजार आउजाउ गरेका कारण लकडाउन प्रभावकारी नहुने देखिएकाले कडा बनाउन मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनुभएको थियो । पौडेलले प्रदेशका सबै जिल्लामा वडावडामा खाद्य सामग्री किनमेल गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेर नागरिकलाई एउटा वडाबाट अर्को वडामा आउजाउ गर्न नपाउने अवस्था बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलको निर्देशनपछि बसेको जिल्ला कमान्ड पोष्ट मकवानपुरको बैठकले लकडाउनलाई कडा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत लकडाउन कडा बनाइने र सङ्क्रमण फैलन नदिने वातावरण निर्माण गरिने प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख किशोरकुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो । “हामी लकडाउन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौं र वर्तमान संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर लकडाउनलाई थप साँघुरो बनाउँदै जान्छाँै”, उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधबार, बैशाख ३, २०७७ १८:०९:२९
पुनम पाण्डेले चर्चा पाउनका लागि गरेका चर्चित हर्कतहरु !
उत्कृष्ट पौडी खेलाडीलाई प्रशिक्षण सामग्री बितरण